၁။ ဆရာရှင့် ကျွန်မအသက်က ၃၅ နှစ်ပါ ကိုယ်ဝန် ၆ လနဲ့ပါဆရာ။ ဒီနေ့အလှူတခုသွားတာ ခြေသလုံးကို ခွေးကိုက်ခံရပါတယ်ဆရာ။ အနာက နည်းနည်းများတယ်။ သွေးတွေလည်းထွက်ပါတယ်ဆရာ။ အကိုက်ခံရရချင်း နီးစပ်ရာဆေးခန်းကိုသွားလိုက်ပါတယ်ဆရာ။ အနာကိုသေချာဆေးကြောပြီး မေးခိုင်ကာကွယ်ဆေးတလုံး၊ ခွေးရူးပြန် ကာကွယ်ဆေးက လက်မောင်းကိုနှစ်လုံးထိုးပေးပါတယ်ဆရာ။ ဆေးထိုးပြီးနောက်တစ်ပတ်ခြား နှစ်ခါထိုးရဦးမယ် ပြောပါတယ်ဆရာ။ ဆေးထိုးပြီးရင်စိတ်ချရပါသလားဆရာ ရင်သွေးလေးကိုထိခိုက်နိုင်ပါသလားဆရာ။ အရမ်း စိတ်ပူနေမိလို့ပါဆရာ။
၂။ ဆရာရှင့် သမီးနာမည်က့့။ အသက်က ၃၂ ပါ။ ကိုယ်ဝန်သုံးလကျော်ရှိပါပြီ။ ရန်ကုန်ကပါ။ ဘီပိုးကာကွယ်ဆေး ထိုးထားတာ ၆ လပိုင်း ၂ဝ၁၅ ဆို တတိယအကြိမ်ထိုးရက်ပါဆရာ။ အဲဒါ ကိုယ်ဝန်နဲ့ဆိုတော့ ထိုးလို့ ရ မရ သိချင်ပါတယ်။ သိလိုသမျှဖြေပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ။
1. BCG တီဘီကာကွယ်ဆေး = မထိုးသင့်။
2. Hepatitis A အသည်းရောင် အေ = ထိုးနိုင်။
3. Hepatitis B အသည်းရောင် (ဘီ) ကာကွယ်ဆေး = တချို့ကိုထိုးပါ။
4. Human Papillomavirus (HPV) သားအိမ်ဝကင်ဆာကာကွယ်ဆေး = မထိုးပါနဲ့။
5. Influenza (Inactivated) တုပ်ကွေးကာကွယ်ဆေး = ထိုးပါ။
6. Influenza (LAIV) တုပ်ကွေးကာကွယ်ဆေး = မထိုးပါနဲ့။
7. Japanese Encephalitis ဂျပန်ဦးနှောက်ရောင်ကာကွယ်ဆေး = လေ့လာမှုမစုံသေး။
8. Measles-mumps-rubella (MMR) မထိုးရ။
9. Meningococcal (MenACWY or MPSV4) လိုအပ်ရင် ထိုးနိုင်။
10. MMR (ဝက်သက် + ပသိရောင် + ဂျာမန်ဝက်သက်) ကာကွယ်ဆေး = မထိုးပါနဲ့။
11. Pneumococcal Conjugate (PCV13) = မပြောနိုင်။
12. Pneumococcal Polysaccharide (PPSV23) = မပြောနိုင်။
13. Polio ပိုလီယိုကာကွယ်ဆေး = လိုအပ်ရင်ထိုးပါ။
14. Rabies ခွေးရူးကာကွယ်ဆေး = လိုမှသာထိုးပါ။
15. Smallpox Post-exposure = ထိုးသင့်။
16. Smallpox Pre-exposure = မထိုးသင့်။
17. Td (tetanus, diphtheria) = လိုအပ်ရင်ထိုးပါ။
18. Tdap (tetanus, diphtheria, and pertussis) = ထိုးပါ။
19. Typhoid တိုက်ဖွိုက်ကာကွယ်ဆေး = လေ့လာမှုမစုံသေး။
20. Varicella ရေကြောက်ကာကွယ်ဆေး = မထိုးပါနဲ့။
21. Yellow Fever အဝါရောင်အဖျားကာကွယ်ဆေး = လိုရင်ထိုးပါ။
22. Zoster ရေယုံကာကွယ်ဆေး = မထိုးပါနဲ့။
Flu Shot and Pregnancy တုပ်ကွေးကာကွယ်ဆေးနဲ့ ကိုယ်ဝန်
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နဲ့ မွေးစကလေးတွေဟာ တုပ်ကွေးကူးစက်ခံရလမ်းများကြတယ်။ နောက်ဆက်တွဲ ဆက်ဖြစ်တာလည်း ရှိတတ်တယ်။ ၂ဝဝ၉ ခုနှစ်က ကမ္ဘာမှာ တုပ်ကွေးကပ်ရောဂါဖြစ်ကလည်းက ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေကို တုပ်ကွေး ကာကွယ်ဆေးထိုးဘို့ လမ်းညွှန်ချက်ထဲမှာ ထည့်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တုပ်ကွေးဖြစ်နေကြလို့ တုပ်ကွေး ကာကွယ်ဆေးထပ်ထိုးရင် ပိုထိရောက်သလား မပြောနိုင်ပါ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်က ထိုးထားပြီးရင် ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ ၁-၈-၂ဝ၁၇ နေ့က ထွက်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။